Pregabalin ntụ ntụ iji na-emeso epilepsy na nchegbu | AASraw ntụ ntụ
/blog/Na-aga n'ihu/Ihe niile I Kwesịrị Aboutmara Banyere Pregabalin
Ihe na 03 / 03 / 2020 by 阿斯劳 dere na Na-aga n'ihu.
1.Gịnị bụ Pregabalin?
Na-aga n'ihu (148553-50-8) bu ogwu ana ere karia n’okpuru aha njirimara Lyrica na mpaghara di iche iche n’uwa. Ọ bụ ọgwụ mgbochi akwụkwụ na-akpọkwa dị ka anticonvulsant. A na-eji ọgwụ ahụ eme ka ụbụrụ ụbụrụ na-eme ka ọ ghara ịdaba. N'aka nke ọzọ, Pregabalin na-emetụta ọgwụ kemịkal nke na-eziga mgbaàmà mgbu na usoro nhụjuanya ahụ. A na-ejikwa ọgwụ na ọgwụ na-agwọ ọrịa dị iche iche kpatara ọrịa dị iche iche dịka nhụjuanya akwara nke fibromyalgia kpatara, ọrịa shuga, yana mgbu mgbu ọgidigi azụ.
Pregabalin dị kapịlị, nnwere onwe, ma ọ bụ mbadamba ogologo oge ma nweekwa nkwupụta onu (mmiri). Predị niile Pregabalin na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ, dọkịta gị ga-abụkwa onye kachasị mma ịhọrọ nke kwesịrị ekwesị maka gị dabere n'ọnọdụ gị ma ọ bụ ihe ịchọrọ inweta site na njedebe nke usoro onunu ogwu. Bụ ọgwụ na -eme ọnụ na-abụ ọgwụ ọgwụ mgbu kacha mma maka ọtụtụ ndị ọrịa na-enweghị ike ị inụ ọgwụ irighiri mgbe niile. Ọgwụ ahụ nwekwara ike ibute ụfọdụ nsonaazụ dị oke njọ mgbe ejiribiga ya ókè ma ọ bụ jikwa ya mee ihe. Gbalịsie ike na ị na-agbaso ntuziaka usoro usoro ọgwụgwọ maka nsonaazụ ka mma.
Pregabalin (148553-50-8) nwere ike iji ya na ọgwụ ndị ọzọ nyere aka na ọgwụgwọ nke ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmụrụ ụmụaka dịkarịa ala afọ anọ na ndị okenye. Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na ụwa ọgwụ, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ọgwụ na-ebelata ihe mgbu na ahịa. Ekwesịrị ị takenụ ọgwụ naanị n'okpuru ndenye ọgwụ dọkịta maka nsonaazụ kacha mma. Agbanyeghị, jide n'aka na ị ga-enweta Pregabalin site n'aka onye na-ere ma ọ bụ onye nrụpụta tụkwasịrị obi gburugburu gị.
2.Usoro nke pregabalin
Pregabalin bụ otu ọgwụ anticonvulsants na ọgwụ. Dịka ọ dị, ọgwụ ndị dị na klaasị a na-arụkwa ọrụ n'otu ụzọ ahụ ma ejiri ya na ọgwụgwọ nke ọnọdụ ndị yiri ya. Amabeghị nke ọma na Pregabalin na-arụ ọrụ, mana ekwenyere na ọ na-arụ ọrụ site na ime ka ahụ dị n ’ahụ mebiri emebi na-eduga na ọdụdụ ahụ. Ọgwụ na-ebelata ihe mgbu dị n’ahụ nke na-akpata ya n’ihi ọtụtụ ihe ma ọ bụ ọrịa. Gwa dọkịta gị maka ịmatakwu banyere Pregabalin.
Na United States nke America, Na-aga n'ihu ka akwadoro iji maka ọgwụgwọ nke ọrịa dịka;
Neuralgia post-herpetic ma ọ bụ ihe mgbu na-eme mgbe azụ gasịrị
Ọrịa mamịrị ụbụrụ neuropathy na
Fibromyalgia bụ ọnọdụ ahụike na-emetụta ihe mgbu juputara, dịka dịka akwara, akwara njikọ, ma ọ bụ azịza dị elu ma na-egbu mgbu. N'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, dịka na Europe, a na-eji Pregabalin na ọgwụgwọ nke nsogbu ụjọ, ọnọdụ a na-eji ọgwụ ndị ọzọ agwọ ọrịa na United States America. Dịka anyị kwuru na mbụ, a na-ejikwa Pregabalin na ọgwụ ndị ọzọ iji bulie nsonaazụ ya. Ndị dọkịta nwekwara ike ịkọtara ndị ọrịa ọgwụ nwere ọnọdụ dịgasị iche iche nke enwere ike ịgwọ ma ọ bụ na-achịkwa Pregabalin.
4.Pregabalin usoro onunu ogwu
Usoro ọgwụgwọ pregabalin na-adabere n'ọnọdụ dị n'okpuru ọgwụgwọ. Agbanyeghị, usoro kachasị dị ala bụ 25mg, ebe nke kachasị bụ 600mg kwa ụbọchị. Dọkịta gị ga-edoziri gị usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị. Mgbe ụfọdụ ndị na-atụgharị uche ga-agwa gị ka ịmalite site na obere usoro, nke enwere ike idozi ya na oge. N'ọnọdụ ụfọdụ, dọkịta gị nwere ike ịbawanye usoro ọgwụgwọ ahụ. Na Pregabalin usoro onunu ogwu bụ ndị a;
Oria Ọrịa mamịrị Ọrịa Neuropathy Ọrịa
Maka ịhapụ ya ozugbo, usoro izizi bụ 50mgs kwesịrị ka ewere ya ugboro atọ n'ụbọchị. Enwere ike ịbawanye dose gị site na dọkịta gị na 100mg ka a ga-ewere ya ugboro atọ n'ụbọchị n'ime izu mbụ, nke a ga-ekpebi site na otú ahụ gị si emeghachi omume na usoro izizi. Nyocha ahụike dị mkpa iji nyochaa ọganihu ọgwụgwọ. N'oge a, enwere ike ịgbatị usoro ọgwụgwọ Pregabalin ruo ogo 300mg kwa ụbọchị, mana ekwesịrị iji oge ahụ mee ya. A na-adụ ndị na-atụ aro ndụmọdụ ka ịmalite site na obere usoro iji belata nsonaazụ.
Mgbatị ahụ ga-achọ ka ị anụọ ọgwụ mbido 150mg nke mbụ otu ugboro kwa ụbọchị, a na-atụ aro ka ị were ya mgbe nri ụtụtụ gasịrị. Dọkịta gị nwere ike ịbawanye usoro onunu ogwu ya rue rue oke ọgwụ 330mg kwa ụbọchị. Mmụba nke usoro onunu ogwu nwere ike ime naanị mgbe dọkịta nyochachara ọganihu gị na nnabata ahụ gị na Pregabalin. Cheta, emezigharị Pregabalin (148553-50-8) usoro ọgwụgwọ na-enweghị nduzi nke dọkịta gị. O nwere ike ibute nnukwu nsonaazụ.
Thatbọchị ị ga-agbanwe usoro ị ga -ewe, were ọgwụ a ụtụtụ ị na-eme dị ka ọgwụ gị si malite wee bido usoro ọgwụgwọ ọhụụ mgbe nri ụtụtụ gị. Nnyocha ọmụmụ ọgwụ ekpughere na iwere ọgwụ dị elu nke ruru 600mg kwa ụbọchị anaghị enye uru ọ bụla ọzọ. N'ihi ya, ị kwesịrị ịrapara na usoro a tụrụ aro ya. Ijikwa ihe kachasị 300 na 330gm kwa ụbọchị adịghị atụ aro ya ebe ọ nwere ike ibute nsonaazụ na-adabere na ya.
Nephọgia okenye nke Postherpetic
N’ebe a ka ekeji uzo onwa abuo abuo, weputara ya nke oma, ma gbue ya, ma ha abuo di iche n’ihe ndi ozo. Dika ọmụmaatụ, na ntọhapụ ozugbo, ọgwụ Pregabalin mbụ bụ 150mg ruo 300mg kwa ụbọchị, nke kewara abụọ ma ọ bụ atọ na ndenye ọgwụ n'otu ụbọchị. N'otu aka ahụ, enwere ike ịba ụba usoro doses ruo 300 kwa ụbọchị mgbe ụbọchị ole na ole dabere na ahụ gị na-emeghachi omume na usoro ịchọrọ. Ọ bụrụ na nsonaazụ ahụ dị oke mma, mgbe ahụ dọkịta agaghị enwe ihe kpatara iji bulie ya. Ogwu ahu nwekwara ike wedata usoro ogwu gi ozo karia i were obere ogwu were hu ezigbo nsogbu ya.
Mgbe ị takingụsịrị usoro ọgwụ 300mg ihe dị ka izu abụọ ruo anọ, na ihe mgbu ahụ ezughị, dọkịta ahụ nwere ike ikpebi ịkpọlite ​​ya ihe dị ka 600mgs kwa ụbọchị ka ewere ya ugboro abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị. Cheta, 600mg kwa ubochi bu ogwu nke ekwuru nke oma maka ndi oria niile. Ceedgafe ọkwa a nwere ike ibute nsonaazụ pregabalin dị njọ, nke ga-esi ike ma ọ bụ nke dị oke ọnụ iji wee tụgharịa.
N'ebe a, usoro izizi nke Pregabalin bụ 165mg nke kwesịrị ị takenụ otu ugboro kwa ụbọchị, ọ na-atụ aro ka ị were ya mgbe nri anyasị. E nwekwara ohere maka usoro onunu ogwu a ga-abawanye na 330mg n'ime izu mbụ nke usoro onunu ogwu. Mgbe abụọ ma ọ bụ izu nke ị medicationụ ọgwụ na enweghị ọganihu dị ukwuu na nhụjuanya ahụ, dọkịta gị nwere ike ibuli usoro ọgwụgwọ ahụ karịa nke 660mgs kwa ụbọchị. Mgbe ị na-agbanwe usoro onunu ogwu, were ụtụtụ maka mgbapụta ozugbo wee bido ọgwụ agbatị ahụ mgbe ị richara nri anyasị.
Akwụkwụ na-adọ okenye usoro onunu ogwu
Maka ọgwụgwọ Akwụkwụ na-adọ, usoro izizi n’ọnụ bụ 150mg kwa ụbọchị, nke kewara abụọ ma ọ bụ atọ. Dịka ọ dị na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ, dọkịta nwere ike ịbawanye ọgwụ ahụ ruo 600mgs kwa ụbọchị ma ekwesịrị ikesa ya ka ewere ya na ugboro abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị. Lee oke onunu ogwu bu 600mg kwa ubochi.
Ọdịmma nke ọgwụ a na-arụ ọrụ niile dabere na usoro ọgwụ a. Enweghị ọmụmụ gosipụtara na ọ dị mkpa ijikọta Pregabalin na gabapentin. Agbanyeghị, dọkịta gị ga-enye gị ndụmọdụ karịa ọgwụ ị ga-eji ya na ọgwụ a.
Fibromyalgia okenye onunu ogwu
N'ebe a, ọgwụ mbụ bụ 75mg were ugboro abụọ n'ụbọchị ma nwee ike gbanwee na 150mg ugboro abụọ n'ụbọchị n'ime izu izizi nke usoro onunu ogwu. A na - enwe ike ịgbatị usoro ọgwụgwọ ahụ na 225mg ugboro abụọ n'ụbọchị. Ngwakọta kachasị maka fibromyalgia bụ 450mgs na usoro mmezi nke ihe dị ka 300mg na 450mg. N'aka nke ọzọ, ọmụmụ ihe na-egosi na ịnara 600mgs kwa ụbọchị anaghị enye ndị ọzọ uru Pregabalin mana ọ nwere ike ibute nsonaazụ siri ike.
Pregabalin maka mgbu Neuropathic
Usoro izizi bụ 75mg kwa ụbọchị, enwere ike ịba ụba na 150mg kwa ụbọchị. N'ọnọdụ, mgbe usoro izu abụọ ma ọ bụ atọ gasịrị, enweghị ezigbo ọganihu ọ bụla, mgbe ahụ ọgwụ gị nwere ike idozi ya elu ruo 300mgs. Usoro usoro akwadoro usoro mmezi a sitere na 150 ruo 600mg nke usoro ịke ọ bụla.
Ntuzi kachasị na Dihydroboldenone / DHB maka Bodybuilding
N'ime ụwa ahụike, o doro anya na Pregabalin na-enyepụta njiri mara mma na nke ọma maka ndị ọrụ na-agbaso ntuziaka ịsụ ọgwụ. Kemgbe mbụ akwadore ọgwụ ahụ na 2004, ọtụtụ nde ndị ọrịa eritela uru site na Pregabalin karịsịa ijikwa ihe mgbu akwara na-esite na ọrịa dị iche iche dị ka Akwụkwụ na-akpata, Post-herpetic neuralgia ma ọ bụ ihe mgbu na-eme mgbe azụ, ọrịa mgbu neuropathy na ọrịa Fibromyalgia. Dabere na ahụ gị si emeghachi omume na Pregabalin, ị nwere ike ịtụ anya ịnụ ụtọ nsonaazụ ahụ n'ime obere oge.
Fewbọchị ole na ole mbụ nke usoro onunu ogwu na-enye dọkịta gị ohere inyocha ọganihu gị tupu ị kpebie ma ị ga-edozi usoro ọgwụgwọ ahụ ala ma ọ bụ karịa. Nnyocha na-egosi na ị kwesịrị ịtụ anya nsonaazụ n'ime ụbọchị ole na ole mbụ nke usoro onunu ogwu. Pregabalin bụ ọgwụ na-eme ngwa ngwa, ya mere, ị kwesịrị ịtụ anya na a ga-ewepụ ihe mgbu n'ime ụbọchị ole na ole nke usoro onunu ogwu. Ọ bụrụ na ịnweghị ọganihu ọ bụla n'ime izu mbụ ị firstụ ọgwụ gị, gwa dọkịta gị ka ị gbanwee usoro onunu ogwu maka nsonaazụ kacha mma. Ahụ mmadụ dị iche, ọ bụghị na ọ na-akpaghị aka na ị ga-enweta nsonaazụ ya ọsọ ọsọ dị ka ndị ọzọ. Ọzọkwa dabere na ọnọdụ ị nọ n'okpuru ọgwụ maka, nsonaazụ ya ga-adị iche. Fọdụ ndị ahụkarị Pregabalin rụpụtara gụnyere;
Na-ebelata ihe mgbu Nerve
Pregabalin bụ ọgwụ dị ike ma a bịa n'ibelata ihe mgbu na-esite na mmebi akwara dị ka ọrịa neuropathy na-efe efe, ọgwụ mgbu na-akpata neuropathic pain, ma ọ bụ Fibromyalgia. Nnyocha dị iche iche gosiri na Pregabalin bụ ọgwụ kachasị dị irè iji belata ihe mgbu neuropathic. Ihe mgbakwunye ahụ ga-adị irè mgbe ejiri naanị ya ma ọ bụ ọbụlagodi na mgbakwunye ọgwụ ndị ọzọ.
Ọ na - eme ka ndụ ndị ọrịa Fibromyalgia nwee ahụ ike
Dịka anyị kwuru na mbụ, Fibromyalgia bụ ọnọdụ ebe ị na-arịa mgbu zuru ebe niile. Mgbaàmà ya gụnyere ezigbo ụra, ike ọgwụgwụ, nchekasị, nkụda mmụọ, nkwonkwo, na isi ike. Ọgwụ na-enyere ndị ọrịa aka ịchịkwa mmetụta ndị a niile.
Na-ebelata ihe mgbaàmà
FDA kwadoro Pregabalin (148553-50-8) maka ọgwụgwọ nke Akwụkwụ na-adọ. A na-atụ aro ọgwụ a maka ndị ọrịa nwere akụkụ akwụkwụ n'ihi mmerụ ahụ ụbụrụ. A na-ejikwa ya dịka ọgwụgwọ ọgwụgwọ maka ndị mmadụ na ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi ọrịa arụ ọrụ.
N'agbanyeghi na United States of America, Ejighị Pregabalin belata ọkwa nchegbu, na Europe, ọgwụ ahụ abụrụla ezigbo ihe ngwọta. Ekwuru na a ga - eji Pregabalin mee ihe na - enweghị enyemaka iji nyere aka n'ịgwọ nsogbu ụjọ na akụkụ ụwa niile. Onwere ufodu n’enweghi akwukwo na mgbe dọkịta gi gha achoputa na odi nkpa inye gi Pregabalin ma ka n’enye nti uto. Ọmụmụ mmụta ọgwụ na obere oge na ogologo oge gosiri na ọgwụ a nwere ike ịgwọ ọrịa oke n ’oke na oke oke n’ mmadụ n’onwe ya.
Ihe nzuzo nke ezigbo nsonaazụ Pregabalin bụ itinye dọkịta gị na usoro usoro ọgwụgwọ niile. Edozila usoro onunu ogwu tupu igwa ndi ogwu gi. Dị ka ị nwere ike isi zụta ọgwụ ahụ site na ụlọ ahịa dị iche iche n'ịntanetị, ebidola ị takingụ ya na-enweghị ịga nyocha ahụike. Ọgwụ a dị ike iji belata ihe mgbu kpatara dị iche iche. Fọdụ ndị na-eme egwuregwu na-ejikwa Pregabalin achịkwa ihe mgbu akwara, na mgbu ọnya azụ, bụ nke na-adịkarị n'ihi mgbatị na asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ.
6.Pregabalin ọkara ndụ
Nke a bụ ọgwụ ngwa-ngwa nke nwere ọrụ Pregabalin ọkara ndụ nke awa 6. Ya mere, maka nsonaazụ Pregabalin ka mma, aga - ekewa usoro ịkpa oke ahụ abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị. Bụ ọgwụ ọgwụ, ọ na - eme ka ọ dịrị gị mfe ịnweta nsonaazụ ebe ọ nwere obere mkpụchaji ọkara ndụ. Na-echeta mgbe nile ịrapara na ntuziaka usoro ọgwụ dọkịta gị nyere gị. Ọ bụrụgodị na ị theụọ ọgwụ dị ala ma ọ bụ nke kachasị elu, ọkara ndụ ọgwụ a ka ọ dị otu.
Dị ka ọgwụ ndị ọzọ dị n'ahịa taa, Pregabalin nwekwara ike ikpughe gị na nsonaazụ siri ike ma ọ bụrụ na ị overụbiga ya ókè. Ọtụtụ n'ime Pregabalin mmetụta dị ka arụmọrụ site na iji ya eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe usoro ahụ gị metụtara ọgwụ ọjọọ. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji bụrụ ihe amamihe dị na ịmalite mgbe ị na-a doụ obere ọgwụ, nke enwere ike idozi echiche gị mgbe ị nyochachara ahụ gị si anabata ọgwụ. Effectsfọdụ nsonaazụ Pregabalin kachasị na-agụnye;
Iri uju - oge ufodu inwere ike itu ura mgbe ị na - a thisụ ọgwụ a, mana ọ ga - apụ n'anya mgbe oge ụfọdụ gasịrị.
Voming, akpịrị ịkpọ nkụ, na isi ọwụwa bụkwa nsogbu ndị ọzọ ị pụrụ inwe mgbe ị na-a thisụ ọgwụ a.
Ọtụtụ ndị ọrụ Pregabalin na-emekwa mkpesa banyere agụụ na-abawanye ụba, nke, n'aka nke ya, na-ebute oke ibu.
Enwekwara ikpe gbasara enweghi ike ịhazi ihe gbasara mọzụlụ, nsogbu ikwu okwu, na enweghi nguzozi anụ ahụ.
Ihe mmetụta ndị a niile dị na Pregabalin na-apụ n'anya mgbe oge ụfọdụ gasịrị, mana ọ bụrụ na ha ga-anọ ogologo oge karịa ka ha tụrụ anya, ị kwesịrị ịgwa dọkịta gị ka ọ nyere gị aka idozi nsogbu tupu ọnọdụ ahụ aka njọ. N’aka nke ọzọ, enwere ụfọdụ mmetụta ọjọọ dị njọ ị kwesịrị ịkpọtụrụ ọgwụ gị ozugbo ị malitere ịhụ ha, ha gụnyere;
Nsogbu nke ọhụhụ, oge ị malitere inweta ọhụụ abụọ, ma ọ bụ ọhụhụ ọhụhụ ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla na anya gị egbula oge, kpọọ dọkịta gị ozugbo.
Ekwukwa na ihu, egbugbere ọnụ, anya, akpịrị, ire, olu, ma ọ bụ isi ozugbo ekwesịrị ozugbo.
Mmetụta ndị ọzọ siri ike gụnyere; ọnya ọgbụgba, mgbu, nkwonkwo ụkwụ, ụkwụ ala, aka, na ogwe aka ma ọ bụ mgbu mgbu.
Ozi ọma ahụ bụ na enwere ike ịchịkwa mmetụta ndị a niile na-aga n'ihu ma ọ bụrụ na ị gwa dọkịta gị n'oge ọ bụ ezie na ọnọdụ ụfọdụ ga-apụ n'anya oge mgbe ị nwetara mmetụta dị elu ndị a kpọtụrụ aha n'elu anaghị aga n'ihu na-ewere usoro onunu ogwu n'agwaghị ọgwụ. Dọkịta gị nwere ike ikpebi ịkwụsị usoro onunu ogwu ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ enweghị ike ịchịkwa ma ọ bụ kwuo usoro ọzọ, ọgwụ dị nchebe maka gị.
8.Uru pregabalin bara
Nke a bụ ọgwụ gosipụtara na ọ bụ otu n'ime ọgwụ mgbochi mbufụt kachasị ike na ahịa taa. Ejiri ya mee ihe iji belata ihe mgbu neuropathic n'akụkụ ụwa niile, na mpaghara ụfọdụ dị ka Europe, akwadoro ya maka ọgwụgwọ nchegbu. Enwere ọtụtụ uru ị ga-enweta mgbe ị na-a thisụ ọgwụ a, Uru pregabalin bara nke bụ dịka ndị a;
Na-anapụta nsonaazụ dị mma
Nnyocha ọmụmụ ọgwụ egosila na Pregabalin na-enye ndị ọrụ ya niile na-agbaso usoro ọgwụgwọ usoro ọgwụgwọ nsonaazụ dị mma. Maka ndị na-eji ya maka ihe mgbu neuropathic, ị nwere ike ịnweta ndozi ọbụlagodi mgbe ị yourụchara ọgwụ nke mbụ. N'ime izu mbụ, ịkwesịrị ịmalite inwe nsonaazụ zuru oke, nke ahụ na-enye ndị na-ahụ maka ohere ịtụle usoro ọgwụ. N'agbanyeghị ihe kpatara iji Pregabalin, nsonaazụ ya na-adọrọ mmasị mgbe niile.
A na-ahụ maka pregabalin site n'ọnụ, ya mere, enweghị ọgwụ ịbanye na ya. N'ihi ya, ọ bụ ọgwụ kachasị mma maka ndị ọrụ adịghị enwe mmịkọrịta mgbe niile. Kwesighi ichegbu onwe gị banyere ihe mgbu ọ bụla, ị nwere ike iso ọgwụ a na ọgwụ ndị ọzọ ngwa ngwa oge niile ị na-agwa dọkịta gị.
Ọ nwere ogologo ọkara ndụ
E jiri ya tụnyere ọgwụ ndị ọzọ a na-aralụ a ,ụ, Pregabalin nwere ndụ ogologo oge na ahụ gị, nke na-eme ka obi sie gị ike na nsonaazụ ya dị mma. Dabere n’ọnọdụ ị na-eji ọgwụ a, ị ga-achọ naanị ị yourụ ọgwụ gị ihe dị ka ugboro abụọ ruo atọ n’ụbọchị na mgbe ụfọdụ otu ugboro kwa ụbọchị mgbe nri mgbede ahụ.
Ọ dị mfe ịnweta
Ị nwere ike mfe zụta Pregabalin ntụ ntụ n'ọtụtụ ma ọ bụ ezuru izu maka usoro onunu ogwu gị site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche ma ọ bụ ụlọ ahịa ọgwụ kacha nso ebe ọ bụ iwu na ọtụtụ akụkụ ụwa. Dọkịta gị ga-abụkwa ezigbo mmadụ iji gosi gị ebe ị ga-azụta ya. Nke a na - eme ka ọ dịrị gị mfe ịzụrụ ma jiri ọgwụ a na - enweghị atụ egwu nke imebi iwu.
Mmetụta ndị na-adịghị njọ
Pregabalin na-ekpughere gị ọghọm mmetụta na-adịghị njọ ma e jiri ya tụnyere ọgwụ anticonvulsants ndị ọzọ. Ga - enwe mmetụta mmetụta ndị ọzọ dị ka isi ọwụwa, ọgbụgbọ, n'etiti ndị ọzọ maka oge mbụ usoro ịsụ ọgwụ, ha ga - apụ n'anya. N’aka nke ozo, oburu na igwa dọkịta gi n’oge, enwere ike ịchịkwa mmetụta dị elu. Agbanyeghị, maka ahụmịhe kachasị mma, gbaa mbọ hụ na ị naghị eji ma ọ bụ megharia usoro ọ bụla na-akọwaghị dọkịta gị.
Na-elele nyocha dị iche iche nke Pregabalin, o doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ nwere afọ ojuju na nsonaazụ ha nwetara mgbe ha takingụsịrị ọgwụ ahụ. A na-eji Pregabalin eme ihe mgbe nile dị ka ọgwụ na-ebelata ihe mgbu, ọ na-anata nzaghachi ziri ezi site n'aka ọtụtụ ndị ọrụ. Ndị nchọpụta ahụike agbakwala nchọpụta dị iche iche, ọ bụ ya kpatara FDA ji kwado ya ka eji ya na ọgwụgwọ Epilepsy, Post-herpetic neuralgia ma ọ bụ ihe mgbu na-eme mgbe shingles gasịrị, Ọrịa neuropathy na-arịa ọrịa shuga na Fibromyalgia.
N'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa dịka na Europe, akwadoro Pregabalin maka ọgwụgwọ nke nchegbu n'etiti ndị okenye. Agbanyeghị, enwerekwa ikpe ole na ole kọọrọ ebe ụfọdụ ndị ọrụ nwere ahụmịhe kachasị njọ na ọgwụ ahụ. Ọgwụ na-emeghachi omume n'ụzọ dị iche na ahụ mmadụ, ọ bụghịkwa nke na ọ na-arụ ọrụ maka gị naanị maka na o nyeere enyi gị aka. Ndi ozo a butere oke nsogbu ndi ozo si na pregabalin.
Na nchịkọta, nke a bụ nnukwu ọgwụ mgbe ejiri ya n'ụzọ ziri ezi yana ebumnuche ziri ezi. O nyeworo aka ọtụtụ nde mmadụ na-arịa ọrịa dị iche iche, dị ka akọwapụtara n’elu. Dị nnọọ ka ọgwụ ọ bụla ọzọ, ị youụghị ọgwụ Pregabalin ọ gwụla ma dọkịta gị kwadoro gị. Ọ bụrụ na ị na-enweta nsonaazụ ndị ọzọ, gwa dọkịta gị ozugbo iji nyere gị aka imeri ha.
10.Pregabalin maka ire ere
Iswa na-agbanwe, taa, ị nwere ike zụta Pregabalin n'ịntanetị n'elu ikpo okwu anyị na ọnụ ahịa ọnụ. Ebe nrụọrụ weebụ anyị bụ enyi na enyi, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịnyagharị site na otu ngwaahịa gaa na nke ọzọ yana ịme usoro gị n'ime sekọnd. Can nwere ike ịnweta weebụsaịtị anyị site na ama gị, mbadamba, ma ọ bụ laptọọpụ gị. N'elu nke ahụ, anyị na-eweta nnyefe gafee ụwa na n'ime oge kachasị dị mkpirikpi. Nwere ike ịzụta Pregabalin n'ọtụtụ ma ọ bụ ọbụlagodi zuru oke maka usoro usoro usoro gị.
Anyị bụ ndị na-ebute ndị na-ebubata ngwa ahịa na mpaghara ahụ, ọnụahịa anyị na-akwụ ọnụ anaghị emebi ụdị ngwaahịa anyị. Anyị na-enye ọtụtụ ngwaahịa ọgwụ dị mma na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị. Agbanyeghị, anyị na - adụ ndị ahịa anyị ọdụ mgbe niile ka ha hụ na ha na-aga nyocha ahụike tupu ha amalite ibute ngwaahịa anyị. Ngwaahịa anyị nwere ike ibute nsonaazụ mgbe ejighị ya mee ihe n'ụzọ na-ezighi ezi. Pregabalin maka ire ere A na - enweta ya n’ụlọ ahịa ọgwụ dị nso mana jide n'aka na ị ga - enweta ya n'aka onye na - ere ahịa a tụkwasịrị obi. Ọ bụghị ụlọ ahịa ọgwụ dị n'ịntanetị ma ọ bụ nke anụ ahụ na-enye ngwaahịa dị mma.
11.Pregabalin na-agwọ mgbu Nerve na Nchegbu
Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, Pregabalin dị ezigbo mkpa na ahụike ụwa karịchaa n'ịgwọ mgbu mgbu, nke a na-akpọkarị mgbu neuropathic. Ọgwụ a na-arụ ọrụ site na ịchịkwa kemịkalụ ụbụrụ nke na-eziga akara na akwara gị, nke na -ebelata ogo nke ihe mgbu gị n’usoro ahụ gị. Na United States of America FDA kwadoro Pregabalin maka ọgwụgwọ nke mgbu akwara nke ọrịa dị iche iche dị ka Akwụkwụ na-akpata, Fibromyalgia, Post-herpetic neuralgia ma ọ bụ ihe mgbu na-eme mgbe azụ ma ọ bụ ụkwara akwara neuropathy.
Agbanyeghị, anabatabeghị Pregabalin (148553-50-8) maka ọgwụgwọ nchegbu na US, ọ bụ ezie na enwere akụkọ na ụfọdụ ndị ọrụ na-eji ya apụ-akara iji chịkwaa ọnọdụ ahụ. N'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa dịka na Europe, a nabatara Pregabalin n'ịgwọ nchegbu nke ndị okenye. Enwekwara akụkọ na-akwadoghị na enwere ike iji Pregabalin chịkwaa ịda mba. Maka ama ndị ọzọ gbasara Pregabalin, kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ kpọtụrụ onye na-ere ọgwụ.
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (2013). Njirimara ọgwụgwọ na ọgwụ eji eme ihe n'etiti ndị ọrịa fibromyalgia nke amitriptyline, duloxetine, gabapentin, ma ọ bụ pregabalin. Ogbu na nkwonkwo & nlekọta, 65(11), 1813-1819.
Ezigbo, CW, & Brett, AS (2017). Gabapentin na pregabalin maka ihe mgbu-abawanyela na-edepụta ihe kpatara nchegbu?. New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Uhie, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Mmetụta nke Pregabalin na nnukwu mgbu postoperative n'okpuru usoro ịwa ahụ dị iche iche: meta-analysis. Medicine, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). Nkọwa maka ọgwụgwọ nke nsogbu nchegbu zuru oke: mmelite. Ọrịa Neuropsychiatric na ọgwụgwọ, 9, 883.
Primo (Methenolone Acetate) bụ onye na-agwọ ọrịa nke anabolic kasị dịrị nchebe maka nwanyị
Ụmụ nwanyị hà nwere ike iji Primobolan (Methenolone Acetate)?
Primobolan bụ ọgwụ na-emekarị ihe anabolic na ịkpụlata steroid cycles
Kedu ka Orlistat si arụ ọrụ dị ka ọgwụ na-efu ibu dị arọ? "Isi iyi ntorobịa": NAD + & NMN dị ka Mgbakwunye